Micro Magic ine itsva RISC-V musimboti, uye inotonhorera kwazvo ... | Linux Vakapindwa muropa
Nhoroondo ye Micro Magic Inc. ikambani yekuCalifornia yakanangana nekupa maturusi eEDA. Yakagadzwa muna 1995, uye yakatengeswa muna 2004 kusvika Juniper Networks. Vatangi vayo ndiMark Santoro naLee Tavrow, vese vane ruzivo, vachinge vashanda pamwe chete paSun Microsystems inotungamira kuvandudzwa kweSPAR microprocessors. Santoro akashandawo kuApple, pasi paSteve Jobs.
Uye ikozvino yasvetukira munhau nekuda kwekuzviti ine RISC-V yakavakirwa kernel uchikurumidza munyika. Uye kwete chete zvinoita sekunge ine yakasarudzika mashandiro, iri zvakare ine simba kwazvo kutaura, sezvo mashandisiro ayo ari pakati nepakati. Chinhu chingave chinonakidza kune nhare mbozha.
Iyo kambani yakapa chiziviso chipfupi pakupera kwaGumiguru 2020. Yakaratidza kuti vaive vawana musimboti zvichibva pa ISA RISC-V 64-chidimbu uye kuti yaikwanisa kumhanyisa kusvika ku5 Ghz pa1.1v. Uye zvakare, iwo manhamba akawanikwa mune mamwe mabhenji ainyatso kuvimbisa, zvichiratidza kuti RISC-V inogona kuita zvakanyanya kana kupfuura mamwe maAsas akura aripo. Ingori nyaya yekugadzira yakakodzera microarchitecture ...
Kana uchiongororwa pane aya mabhenji mabhenji, mamaki senge 13.000 mapoinzi muCoreMark. Imwe Micro Micro musimboti inomhanya pane zita 0.8v inogona zvakare kuendesa 11.000 CoreMark mapoinzi @ 4.25Ghz, ichidya chete 200mW.
Mufananidzo iwe waunogona kuona muchinyorwa ibhodhi reOdroid ine Micro Magic chip inomhanya pa4,327 Ghz pa0.8v uye 5.19Ghz pa1.1v. Muenzaniso wakapihwa naAndy Huang, Micro Magic chipangamazano, wepakati EETimes.
Uye kana izvo zvichirira senge zvakawanda kwauri, mirira kuti uone fananidzo dzavakaita vachishandisa indekisi sereferenzi. EEMBC. Muchiitiko ichocho, iwe unowana mamakisi e55.000 CoreMark pawatt yeiyi RISC-V. Kune rimwe divi, kana ichienzaniswa ne Apple Silicon, iyo M1, iyi yaizowana chete 10.000MoreMark maererano neEMEMBC. Mune mamwe mazwi, iyo Micro Magic chip yaizodarika iyo yeApple nenzira iyoyo. Zvakare, kana iwe ukakamuranisa izvo nema 8 cores eiyi SoC uye 15W, zvinokwana zvishoma pasi pezana CoreMark pa watt.
Kubva kuMicro Magic ivo vanga vachidawo kuratidza zvakawanda kune ino svikiro. Uye ivo vakafananidza iyo RISC-V yakavakirwa chip neiyo Maoko Cortex-A9. Pasi peaya mabhenji eEEMBC, iyo quad-core Cortex-A9 inozadzisa chiyero che22.343 CoreMark, iyo kana ikakamurwa pakati peaya mana cores uye 5W pamusoro wega, iwe unowana chete 1112 CoreMark pawatt. Ndokunge, iyo Micro Magic chip yaizobuda ichikunda zvakare.
Huang akaenderera mberi nekutsanangura aya mamaki uye kukosha kwe mashandiro pa watt. Uye ndezvekuti iwo akakosha chaizvo kune azvino mbozhanhare mbozha dzinoenderana nebhatiri, uye kunyangwe zvimwe zvikamu zveindasitiri uko kunwa kunokosha. Iine iyo 200mW yekushandisa kweMicrosoft Chip, inosvika makumi maviri neshanu RISC-V cores inogona kuiswa mukati yekushandisa chaiko kwe25W. Icho chingave chinhu chakanakisa, nekuti vashoma vanogona ikozvino kuzvirumbidza nekuva nemachipisi ane akawanda macores mumatsimba (parizvino pane QuadCore kana OctaCore machipisi).
Huang akataura zvakare kuti kunyangwe hazvo iri kambani yebasa reEDA parizvino, vari kuronga kupa yavo RISC-V yakakosha dhizaini kune vatengi vari pasi IP inopa marezinesi. Nenzira iyi, mamwe makambani anozokwanisa kuvashandisa kuyera muzvirongwa zvavo zvinoenderana nechero chikamu chavanoda (zvemotokari, nharembozha, PC, nzvimbo dzematare, ...).
Mamwezve ruzivo rwakanangana
RISC-V inouya kuPC
UEFI inotsigira RISC-V
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Micro Magic ine itsva RISC-V musimboti, uye inonakidza kwazvo ...